မက်ခီတာရန်ရဲ့ စကော်ပီယံ ကစ်ကို မော်ရင်ညို ချီးကျုး . - Myanmarload
မက်ခီတာရန်ရဲ့ စကော်ပီယံ ကစ်ကို မော်ရင်ညို ချီးကျုး .
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 15:58 December 27, 2016
မန်ယူ နည်းပြ မော်ရင်ညိုက ဆန်းဒါးလန်း အသင်းဘက်သို့ စကော်ပီယံကစ်ဖြင့် လှလှပပ ဂိုးသွင်းယူခဲ့သော မက်ခီတာရန်ကို ချီးကျုးသွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ချဲလ်ဆီးနှင့် အမှတ်ကွာဟမှုကို ဂရုမစိုက်ကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
မော်ရင်ညိုက -" ချဲလ်ဆီးနဲ့ အမှတ်ကွာဟမှုကို ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူူး၊ ကျွန်တော့် အသင်း အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်ဖို့ရယ် ရလာဒ်ကောင်းရယူ နိုင်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်တယ်၊ ချဲလ်ဆီးနဲ့ အမှတ် ဘယ်လောက်ကွာကွာ လက်ကျန် ပွဲစဉ်တွေမှာ ရမှတ်တွေကို ယူနိုင်သလောက်ယူသွားမယ်"ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။
မက်ခီတာရန်၏ သွင်းဂိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး - " အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ ကန်သွင်းချက်ပါ၊ ပရိတ်သက်တွေကိုအ့ံသြမှင်သက်စေတဲ့ဂိုးပါ၊ ဒဏ်ရာပြဿနာကနေ ရုန်းထွက်လာတဲ့ သူ့အတွက်လည်း အရေးပါတဲ့ဂိုးပါ၊ တကယ့်ကို ထူူးချွန်တဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက်ပါ" ဟုချီးကျုးခဲ့သည်။
Ref., Football Cafe
သူမရဲ့Official pageလေး blue markရသွားတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်‌ကျေနပ်နေတဲ့သံသာမိုးသိမ့်
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ပုဏ္ဏကတိုက်တဲ့ အိမ်အကြောင်း
ဂန္တဝင်မြောက် ရှေးဟောင်းကဇာတ်ရုံကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီရိဒါ
ဒဏ္ဍာရီလာ လူတစ်ပိုင်း ငှက်တစ်ပိုင်း မကောင်းဆိုးဝါး သတ္တဝါများ
Page generated in 0.1528 seconds with5database query and6memcached query.